US umlingisi Dzheyms Uitmor, konke ukuphila kwakhe kwaba ngokuphelele nikela kuze yaseshashalazini kanye cinema, izethameli zikhunjulwe ngokuyinhloko ngenxa izindima isici kumabhayisikobho futhi ukusebenza elikhanyayo on Broadway. Shiya ezinye zibe yizinqamu Marine ukumamatheka disarmingly uhlobo ngokushesha yatha- Hollywood.
Lo mlingisi wazalwa ngo-October 1, 1921 e umkhaya ovamile we esemthethweni uJames Allen Whitmore, Sr. nomkakhe, Florence Belle. Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme, waya Yale University, lapho ayeyilungu ubuzalwane "Skull futhi Amathambo". Phakathi kwempi yezwe yesibili, Whitmore wakhonza e-US Marine Corps.
oyibamba Inkonzo yakhe yesikhathi waqala ngemva 1945 on Broadway. Phakathi indima yakhe yokuqala ngqá endaweni ukukhiqizwa "isinqumo Team," wathola umklomelo ohlonishwa "kusho uTony" njengoba best imfundamakhwela umlingisi. Isinyathelo sesibili nodumo kwaba indima ku "Battlefield" ifilimu (1949), okuyinto amenza "Golden Globe" futhi ukuqokwa lokuqala "Oscar". Impumelelo enkulu ukuthi ithole Dzheyms Uitmor emva kudlalwé isithombe kwaholela umsebenzi asebenzayo ifilimu. Kumdlali iminyaka eminingi ukwazile ngokuvumelanayo ukuhlanganisa umsebenzi ifilimu, ithelevishini kanye yaseshashalazini, lapho kuzuza udumo nokubonwa.
D. Whitmore wayeshadile kane, kabili kowesifazane efanayo, unina wamadodana akhe amathathu Nancy Migatt. Esikhathini kusuka 1972 kuya ku-1979 eseshadile nimlingisi Oder Lindley, 2001 - ne umbhali Norish Nash. Lo mlingisi ushone eneminyaka engu-87 umdlavuza wamaphaphu ekhaya lakhe Malibu.
Dzheyms Uitmor (isithombe ephepheni) inkanyezi for kwenkonzo yakhe ende e ezingaphezu kuka-130 amafilimu nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini.
Le nkathi kwaphawulwa kumdlali livela okokuqala eHollywood futhi eqa enkulu lokudala. Ngemva ukuqopha movie W. Wellman "enkundleni" ngo-1949, wathola udumo. ifilimu zomlando ukhuluma ngezenzakalo Second neMpi Yezwe, Siege of Bastogne izinsuku. E. Wilmore wenziwa actor - uSergeant Kinney. Le filimu saba impumelelo enkulu ehhovisi ibhokisi, ibhokisi izikhundla eziphakeme futhi, ngokombiko kamagazini i Photoplay, kuba okungcono ngo-1949.
Khona-ke umsebenzi umlingisi sika basungula kuyanda. Kulandele izindima kumafilimu ezifana "I Asphalt Jungle" (1950) - a noir ifilimu kusekelwe noveli U. R. Bernetta, okuyinto engena Isikhwama yegolide Hollywood, "Ngenxa yalokhu," (1954, izisebenzi ezivela isithombe isithombe ngenhla) - -sci-fi strip, omunye ngowokuqala ukuphakamisa lolu daba imiphumela kwezikhali zenuzi, "Oklahoma" (1955) - a zomculo mayelana nesikhathi kumiswa isimo esisha.
Phakathi neminyaka eyishumi eyalandela umsebenzi wakhe kwaphawulwa umlingisi sehlelo ifilimu "Planet we Izinkawu," esekelwe inoveli by Pierre Boulle, lapho Dzheyms Uitmor wadlala indima ehamba phambili - uMongameli weBandla (luhlaka kusukela ifilimu esitfombeni, umlingisi uhlamvu phakathi). Ngaphezu kwalokho, ukunakekelwa okukhethekile kufanele kube ama-movie "Izigidi Madigan" (1968), "Izibhamu omangalisayo eziyisikhombisa" (1969).
Ngesikhathi esifanayo yena wawumatasa esebenza kumabonakude ochungechungeni "UDkt Kildare," "Virginian", "Ukuboshwa nokuqulwa kwecala", "The Show Omkhulu Kunabo Emhlabeni", "Justice Burke", "ukusuka mpo", "Single", " Tarzan, "" Shane "kanye nabanye abaningi.
Imidwebo edume kakhulu futhi emangalisayo kwalesi sikhathi angabhekwa idrama oluchaza egcwele phakathi amahlaya ezicashile ekuphileni kwansuku zonke uMengameli waseMelika Harry Truman, "Thumela kubo bonke esihogweni, Harry!", Ikuphi wadedelwa ngo-1975. tape kuyindida esekelwe izinqubomgomo izinkumbulo, kokubili impumelelo yemisindvo nezinto ezinhle nezimbi.
Iqhaza main kudlalwa Dzheyms Uitmor (esesithombeni), brilliant umdlalo actor waklonyeliswa yokuqokela "Oscar".
Phakathi nenkathi efanayo, isikrini kufika ifilimu mayelana Pearl Harbor, "Tora! Tora! Tora! ", Abaziwayo esiphezulu ubuqiniso emlandweni, Thriller umphenyi" Iqanda yeNyoka "," Land Chato ".
Ngalesi sikhathi, ezingaphezu kuka kumdlali uvele kuthelevishini yaseshashalazini nemidlalo. Kufanele kuqashelwe tape "Ukufutheka", "Isono sokuqala esibulalayo", izwi esebenza kuphrojekthi opopayi "The Adventures of Mark Twain," "UMose".
Ngo-1987, D. Whitmore ithatha ingxenye ifilimu okukhulu "Crazy" nge B. Streisand in the indima abaholayo, yena kubonisa umfanekiso amajaji. Tape Wamukelwa ngemfudumalo abantu abaningi, a baxgeki kanye iziphakamiso yaklonyeliswa "Golden Globe".
Omunye imisebenzi ababetelekile ngo esigabeni sokugcina umsebenzi wakhe - kuyinto movie "The Shawshank Redemption." Dzheyms Uitmor abadlale indima umsebenzi endala emtatsheni wezincwadi wasejele Brooks Hatley (Uhlaka wefilimu esithombeni ngenhla). Tape okukhulu F. Darabont, wathwebula phezu noveli uStefanu King, usesikhundleni okuholela uhlu amabhayisikobho best of sonke isikhathi.
Ngo-1997, umlingisi waba nengxenye fantasy Thriller "Relic" njengoba uDkt Albert Frock, ngo-2001 - kule drama "Umkhulu Ngokubabazekayo".
Ngo-2000, D. Whitmore waklonyeliswa "Emmy" ku ukuqokwa "The Best lezivakashi actor ku Drama Series" ngokubamba iqhaza iphrojekthi "Kwenzeni umkhuba" njengoba Raymond Oz iziqephu ezimbili nje. I izikrini esikhathini kusuka 1997 kuya ku-2004 ubugebengu eqanjiwe umsebenti zomthetho e-Boston yimpumelelo nezilinganiso okusezingeni eliphezulu.
Omunye amafilimu lokugcina iqhaza lakhe - "Ibanga", "Infinite Khanyisa Ring" uchungechunge "Mnumzane Sterling", "Umzuzu nge Stan Hooper".
Dzheyms Uitmor, amafilimu kanye indima aziwa futhi abathandwa abaningi, kwaba kumdlali oluvelele ahlukahlukene owakwazi ukwenza umsebenzi wokuziphilisa omuhle hhayi kuphela e cinema kodwa futhi kumabonakude kanye ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Ngegalelo lakhe elikhulu ekuthuthukiseni le mboni kanye ithalenta esiyingqayizivele, yena yanikezelwa inkanyezi yakhe siqu ngaphansi inombolo 6611 phezu edumile Hollywood Walk Lodumo.
Kuyini OBA futhi kungani ukudala ke?
"Omunye Omunye plus": nabalingisi izindima. Le filimu "1 +1" ( "abakhishwa inyumbazane")
"X-Men": izinhlamvu kanye nemandla abo
Ukuphila Siqu kanye Biography of Anna Frolovtsevoy
Izimfihlo idivayisi yomsindo, noma indlela ukuxhuma izikhulumi TV
Ngamunye wethu uhlala kwenye indoda. ngakho uthi
Kangakanani nokuvulwa ulwazi kusuka drive flash
Evundile zikasimende: izici lobuchwepheshe, nemiphumela ethile engathandeki, kokufaneleka
Indlela babhale indaba ekhuluma "Abantu uyaphila?"
Indlela ukukhetha iphrinta irisidi. Izinhlobo pos-amaphrinta
Umkhiqizo "L-carnitine". Ukubuyekezwa kwe Fat nezibhengezo
Kungani iphupho ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi (amanzi, esibhakabhakeni)? Kungani dream dada elimnyama?